Axad 28 Bisha Saddexaad 2021
Farshaxan Icebergs waa farshaxan gudaha ah. Adoo isku xiraya buuraha, waxaa suurtagal ah in la dhiso safafyo buuro, muuqaalka maskaxda ee laga sameeyay dhalooyinka. Dusha sare ee shey kasta oo galaas dib loo warshadeeyo waa mid gaar ah. Markaa, shay waliba wuxuu leeyahay dabeecad u gaar ah, nafta. Sawirro farshaxannada gacanta ayaa lagu taagayaa, la saxeexay oo lagu lambariyaa dalka Finland. Falsafadda ugu weyn ee ka dambeysa farshaxannada Iceberg waa inay ka tarjumaan isbedelka cimilada. Sidaa darteed sheyga loo isticmaalay waa muraayadda dib loo rogay.
Sabti 27 Bisha Saddexaad 2021
App Watch TTMM waa soo uruurinta 130 Dheecaan oo loogu talagalay Pebble 2 smartwatch. Moodooyinka gaarka ah waxay muujinayaan waqtiga iyo taariikhda, maalinta usbuuca, talaabooyinka, waqtiga waxqabadka, masaafada, heerkulka iyo baytariga ama heerka Bluetooth. Isticmaalaha ayaa diyaarin kara nooca macluumaadka isla markaana arki kara macluumaad dheeraad ah ka dib ruxashada. Daawashada TTMM waa mid sahlan, uguyar, naqshad ahaan loo qaabeeyey. Waa isku-darka lambarrada iyo macluumaad-qeexan-aan-caadi ahayn oo ku habboon xilligii robots.
Jimco 26 Bisha Saddexaad 2021
App Watch TTMM waa aruurinta 21 waji oo wajiyo ah oo loogu tala galay Fitbit Versa iyo Fitbit Ionic smartwatches. Wajiyada saacaduhu waxay leeyihiin dejinta cillado kaliya iyada oo shaashad fudud lagu shaashadda yahay. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u dhakhso badan oo sahlan oo ay u habeeyaan midabaynta, jaangooyooyinka naqshadeynta iyo dhibaatooyinka ka jira doorbidista isticmaalaha. Waxaa lagu dhiiri geliyay filimo sida Blade Runner iyo taxanaha mataanaha ah ee 'Twwin Peaks'.
Barnaamijyada 'watchfaces Apps'
Khamiis 25 Bisha Saddexaad 2021
Barnaamijyada 'watchfaces Apps' TTMM waa aruurinta meelaha lagu daawado ee Waqtiga Pebble iyo Pebble Time Round smartwatches. Waxaad ka heli doontaa halkaan laba barnaamij (labadaba qalabka Android iyo macruufka) oo leh 50 iyo 18 moodal oo ah wax kabadan 600 nooc oo midabyo ah. TTMM waa mid fudud, ugu yar oo isku-dhafan oo ah tirooyinka iyo xog-garaynta aan-rasmiga ahayn. Hadda waad dooran kartaa qaabkaaga waqtiga markasta oo aad jeceshahay.
Arbaco 24 Bisha Saddexaad 2021
Sumadaha Khamriga Naqshadeynta sumadaha khamriga ee KannuNaUm waxaa lagu gartaa qaabkeeda nadiifka ah iyo tan ugu yar, oo lagu helay raadinta astaamo matalaya taariikhdooda. Dhul, dhaqan iyo xamaasad ee koox-koox khamro-cabeyaasha ah ee Dhul-beereedka waxaa loo oggolaaday labadan astaan ee isku-dubbaridan. Wax kasta waxaa lagu wanaajiyaa naqshadda geedka canabka ah ee qarniga oo lagu sameeyay farsamada dahabka lagu daadiyey 3D. Naqshadeynta iconography oo mataleysa taariikhda koobabkan oo lala socdo taariikhda dhulkii uu ka dhashay, Ogliastra Land of Centenaries ee Sardinia.
Naqshadeynta Sumadaha Khamriga
Talaado 23 Bisha Saddexaad 2021
Naqshadeynta Sumadaha Khamriga Loogu talagalay garoon taariikhi ah ee Sardinia, ilaa 1970, waxaa loo qaabeeyey dib-u-habeynta summadaha khadka toosan ee 'The Classic wines Line'. Daraasad lagu sameeyay magacyada cusub ayaa doonayey inay ilaashadaan iskuxirka iyo dhaqanka ay shirkaddu waddo. Si ka duwan sumadihii hore waxay u shaqeysay inay bixiso taabasho xarrago leh oo ku habboon tayada sare ee khamri-hoosaadka. Calaamaduhu waxay la shaqeynayeen farsamooyinka Braille oo keena qurux iyo qaab aan miisaan lahayn. Qaabka ubaxa wuxuu ku saleysan yahay sharraxaadda jaantus ee qaabka kiniisadda u dhow ee Santa Croce ee Usini, kaasoo sidoo kale ah astaanta shirkadda.
Aoxin Holiday Hudheel Axad 9 Bisha Shanaad
Superegg Rakibaadda Farshaxanku Sabti 8 Bisha Shanaad
Bionyalux Xirmada Daryeelka Maqaarku Jimco 7 Bisha Shanaad
Farshaxan App Watch App Watch Barnaamijyada 'watchfaces Apps' Sumadaha Khamriga Naqshadeynta Sumadaha Khamriga